6 min novakiana
Mount Abu dia tobin'ny havoana mahaliana any amin'ny tany efitra any Rajasthan. Any amin'ny distrikan'i Sirohi no misy azy ary iray amin'ireo toerana tantaram-pitiavana ambony indrindra any India.
Any amin'ny haavo 1220 m ambonin'ny haabon'ny ranomasina no misy azy ary izy irery no gara eo amin'ny fanjakana. Toeram-pialan-tsasatra malaza izy io, toerana fivahinianana masina satria manana firesahana manan-danja amin'ny angano ary koa toerana itadiavana volan-tantely. Ity lahatsoratra ity dia miresaka amin'ny antsipiriany momba ireo zavatra manintona valo voalohany ao amin'ny Mount Abu izay tokony hovangianao.
Tempolin'i Dilwara Jain
Ity andiana tempoly ity dia somary lavitry ny faritry ny Tendrombohitra Abu. Ireo tempoly ireo dia naorina teo anelanelan'ny taonjato faha-11 sy faha-12 tamin'ny fampiasana teknika fametrahana marbra sy vato hafa. Izy io dia iray amin'ireo toerana manan-tantara sy toerana fivahiniana masina. Misy tempoly dimy ao amin'io toerana io. Ny sary sokitra eo amin'ny valindrihana sy sary hosodoko hafa izay manazava ny angano momba ny Jainisma sy ny Hindoisma dia hita eto. Ity dia toerana tsara fitsangantsanganana, fakana sary ary fitsangatsanganana.
Toeram-piarovana Wildlife Aravalli
Ireo tandavan-tendrombohitra Aravalli dia manana faritra ala izay ambara ho toeram-piarovana biby. Izy io dia faritra ala tropikaly misy karazam-biby tsy fahita toa ny leoparda, langur, sambhar, amboadia, saka ala, mongoose, jackal, hyena, amboahaolo indiana sy ny hafa. Toerana manan-danja amin'ny fijerena vorona ihany koa ity fitoerana masina ity. Afaka mahita karazam-borona mahaliana maro toa ny vorona ahitra fotsy sy karazam-borona 250 hafa ianao.
Ny toerana misy fizahan-tany manan-danja any amin'ny havoana dia ho farihy. Ny Lake Nakki dia sady manintona olona no masina koa. Betsaka ny tantara angano momba ny nananganana ny farihy. Ity toerana ity dia malaza amin'ny Gandhi Ghat, fitsangantsanganana, fitsangantsanganana, sambo ary ny hafa. Azonao atao ihany koa ny mitsangatsangana kely manodidina ny farihy. Afaka mahita trano fisakafoanana maro eto ianao hankafizanao snacks mafana sasany. Misy loharano artifisialy manampy hatsarana amin'ilay toerana.
Ny lalana Abu dia somary lavitry ny tobin'ny havoana lehibe. Ity lalana ity dia malaza be amin'ny familiana mahavariana. Afaka mahita tempoly be dia be ianao, Banas River sy ny hafa. Misy gara eo amin'io lalana io ary raha mitsidika ny volana novambra na desambra ianao dia makà kely amin'ny fiaran-dalamby hankafizanao ilay toerana mahafinaritra. Afaka mahita trano fisakafoanana be dia be eto ianao ary tokony hanandrana Rabri, lovia mamy iray azo avy amin'ny Mount Abu. Afaka mahita bazaar vitsivitsy ianao hiantsenana.
Ity dia trano mimanda tamin'ny taonjato faha-15 izay manimba ankehitriny. Ny tena manintona eto ankehitriny dia ireo tilikambo granita roa izay mbola miavona. Misy tempolin'i Shiva taloha koa. Ny tempoly dia voalaza fa manana ny dian-tongotr'i Lord Shiva. Afaka mahita sary vongana varahina omby eo akaikin'ny dobo iray ianao. Toerana mahafinaritra ho an'ny sary, fitsangatsanganana ary fivahiniana masina.
Guru Skihar no toerana avo indrindra amin'ny tendrombohitra Abu. Ity toerana ity dia malaza amin'ny tempoly taloha. Fa, ity toerana ity dia tototry ny mpivady tantaram-pitiavana foana. Mangina, mangatsiaka, mahona ary manaitra ny toerana. Tsy mahita fivarotana be dia be ianao eto, ka manaova piknik ary manaova fahafinaretana eto. Heverina ho masina koa io toerana io. Aza adino ny fakantsarinao satria toerana iray mahafinaritra io toerana io. Raiso ny 10 alina sy 11 andro fitsangatsanganana vondrona Rajasthan ary mankafy ny toeran-kaleha isan-karazany.
Zaridaina voay ao Trevor
Ity dia toerana fiompiana voay izay ahitanao karazana voay maro. Ankoatr'izay dia afaka mankafy piknik eto ianao. Raha mitsidika ny volana novambra na desambra ianao dia afaka mahita bera mainty sy biby hafa eto. Toa an'i Rivendell ilay toerana. Ny fijerena vorona, ny fakana sary ary ny fitsangantsanganana dia hetsika telo lehibe ankafizinao eto.
Toerana fitsangatsanganana sy fitsangatsanganana ity toerana ity. Masina ny tempoly ary afaka mahita lalàna marbra ao anatiny ianao. Misy renirano mikoriana avy amin'ny iray amin'ireo omby marbra. Misy tempoly hanuman eo afovoan'ny lohasaha. Mandehandeha any amin'ny tempoly ny olona hisaintsainana sy hanao tanjona fivahinianana masina. Tokony hitsidika ireo ala eritreritra manodidina ny faritra ianao raha toa ka vonona amin'ny diany matotra.
Misy toerana maro hafa ao an-tendrombohitra Abu hankafizana toy ny filentehan'ny masoandro, Adhar devi ary ny hafa. Ny fotoana tsara indrindra hitsidihana ny tendrombohitra hankafizanao ny natiora dia eo anelanelan'ny volana martsa sy jona. Raha mitady traikefa amam-pitiavana ianao dia tsidiho mandritra ny Novambra sy Desambra.
Fomba 4 hahatonga ny fialan-tsasatry ny fianakavianao tsy hay hadinoina
Zava-tsarobidy 7 alohan'ny fianihana an'i Aconcagua